Inhlambuluko (ukuxokozela) – iAfrika
Uma elinye lamalunga omndeni kwenzekile ladlula emhlabeni, labo abasele ngemuva basala nejoka lokumenzela umsebenzi (umcimbi) obizwa ngenhlambuluko ngemuva kwesikhashana esincane edlulile emhlabeni. Leli ngelinye lamasiko esiNguni olubonakala lusenziwa kakhulu yize noma sekube noshintsho oluncane kulona, futhi kungelinye lalawo masiko asethanda ukushabalala.
Inhloso yosiko lwenhlambuluko
Okusuke kuhloswe ngosiko lwenhlambuluko wukuba lususe ithunzi elibi elilethwa ukuvela kwesifo emndenini kulabo abasele ngemuva. Luyenziwa futhi ukunxenxa abaphansi ukuba bavikele umndeni ezehlakalweni ezifana nalesi esisuke senzekile (ukufa) zingabi inhlalayenza. Okunye okwenzelwa usiko lwenhlambuluko wukuba luxhumanise lowo osuke esedlulile emhlabeni kanye nabaphansi, ukubazisa ukuthi usendleleni uyeza kubona, kanye nokuncenga idlozi ukuba limamukele bese limvumela ukuba abe yidlozi elihle kulabo asuke ebashiye ngemuva.
Okwenziwayo ngosuku lwenhlambuluko
Amalunga omndeni asele emhlabeni athenga imbuzi yesilisa uma kushone umuntu wesilisa, athenge eyesifazane uma kushone owesifazane. Okubalulekile kakhulu wukuthi leyombuzi kumele ibemhlophe ukuze yamukeleke emadlozini. Uma imbuzi yalowomsebenzi isingaphakathi emagcekeni omuzi, ngaphambi kokuba inhlinzwe umuntu wesilisa omdala kulelokhaya kumelwe ayishisele impepho leyombuzi bese eyishunqisela ebe ekhuluma nabaphansi acele bamukele lowo msebenzi owenziwayo. Abesilisa abangaphezu kweminyaka eyishumi baye bahlanganyele ukuzohlinza imbuzi. Ngemuva kokuba isihlinziwe kuthathwa inyongo yaleyo mbuzi ibekwe emsamo, kanye nenyama, bese ngakusasa abomndeni bathathe leyonyongo bayogeza ngayo emanzini ahambayo, imvamisa okuba wumfula noma impophoma. Uma lokho sekwenziwe, inyama ibe isiphekwa kwenziwe umcimbi wenhlambuluko kumenywe nomakhelwane.
Isikhathi sokwenza usiko lwenhlambuluko
Esikhathini saphambilini usiko lwenhlambuluko lwalenziwa ngemuva kwesonto kudlule umngcwabo. Kwakukholelwa ekutheni uma umuntu edlula emhlabeni kuthatha isikhathi ngemuva komngcwabo ukuba ahlangane nabaphansi abe yidlozi. Kepha ngokuhamba kwezikhathi lolusiko lube noshintsho, sekujwayelekile ezinsukwini zanamuhla ukubona imindeni yenza usiko lwenhlambuluko osukwini olulandela lolo olomgcwabo noma ngalo usuku lomngcwabo uma sekubuywa emathuneni ukuyofihla odlulile emhlabeni.
Tags Inhlambuluko, Ukuxokozela
Amadlozi Amakhaya Amalobolo Imbeleko Imicimbi Imicimbi yesintu Imishado Inhlonipho Izaga Izibongo Izigodi Izinkolelo zesintu Izisho Shembe Ubungoma Ukudla Ukudla kwesintu Ukugana Ukukhulelwa Ukulandwa Ukulobola Ukuthwasa uMabo uMembeso Umemulo Umendo Umhlonyane Umsamo Umshado Utshwala